Maxkamad Masar ayaa joojisay xukunkii xabsi daa'inka ee Maxamed Morsi - BBC Somali
Maxkamad Masar ayaa joojisay xukunkii xabsi daa'inka ee Maxamed Morsi
Image caption Mohammed Morsi's supporters say the trials are attempts to give legal cover to a coup
Maxkamadda sare ee racfaanka ee Masar, ayaa joojisay xukun xabsi daa'in ah oo lagu xukumay madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Morsi.
Maxkamadda ayaa amartay in dacwadda Morsi ee la xiriirta inuu la shaqeeyay ururo argagixiso oo shisheeye si loo sameeyo weerar dib loo bilaabo.
Toddobaadkii hore, maxkamadda ayaa joojisay xukun dil oo lagu xukumay Morsi dacwad kale oo la xiriirta xabsi laga baxsaday waqtigii kacdoonkii 2011.
Wuxuu wali u xiran yahay xukuno waqti dheer oo la xiriira laba dacwadood oo kale.
Morsi ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay oo si dimoqraadi ah loo doorto 2012-kii, laakiin waxaa xukunka ka qaaday milatariga sanad kadib markii ay dhaceen mudaaharaadyo looga soo horjeedo xukunkiisa.
Tan iyo markaas, masuuliyiinta ayaa bilaabay inay ka hortagaan xisbiga Morsi ee Akhwaan Muslimiinta oo la mamnuucay. Waxaa ku dhintay boqolaal qof iska hor imaadyo ciidamadda ammaanka iyo dadwaynaha, waxaana la xiray kumanaan qof.
Image caption Xamaas, oo xiriir la leh Akhwaan Muslimiinta ayaa dabaaldegtay markii la doortay Morsi 2012